Fanomezana sy antoka lehibe - BullyingCanada
Ahoana no ahafahanao manana fiantraikany lehibe amin'ny fahasalaman'ny ankizy ampijaliana
Azonao atao ny miantraika avy hatrany amin'ny fahasalaman'ny sain'ny tanora eo amin'ny fiaraha-monina misy anao sy manerana an'i Canada amin'ny alalan'ny fanaovana fanomezana lehibe ho an'ny BullyingCanada.
BullyingCanada dia miankina amin'ny fanomezana avy amin'ny tsirairay, fiaraha-monina, fototra ary orinasa ho an'ny ankamaroan'ny famatsiam-bolantsika. Ny fanomezana lehibe dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fanohanana ny serivisy fanohanana 24/7 ho an'ireo ankizy tra-boina, sy ny famelabelaranay momba ny fampijaliana any an-tsekoly, toeram-piasana ary ivon-toerana. Ny fahalalahan-tananao miavaka dia hanampy anay hanaraka ny fitomboan'ny isan'ny ankizy manatona anay mba hahazoana fanampiana sy hanatsara ny fampahalalana sy loharano azonay atolotra azy ireo amin'ny fiteny 104.
Afaka manana fiantraikany mamonjy aina amin'ny tanora ampijaliana ianao amin'ny fanomezana fankasitrahana varotra ampahibemaso. Amin'ny fanaovana izany dia hahazo tombony ihany koa ianao amin'ny tsy fandoavana ny hetra amin'ny tombotsoa amin'ny fanomezanao. Mba hahazoana tombony amin'io famotsoran-ketra io, ny fanomezanao dia tsy maintsy atao amin'ny fomba iray. Ampidino azafady ny anay Fanomezana ny Securities Fact Sheet raha mila fanazavana fanampiny, na mifandraisa aminay araka ny voalaza etsy ambany.
Raha manana fahalianana manokana amin'ny BullyingCanadany asan'ny, miarahaba anao izahay miresaka aminao momba ny fiantraikan'ny fanomezanao. Afaka manolotra fankasitrahana ampahibemaso ho anao koa izahay noho ny fanohananao, raha tianao. Ny famelana anay hisaotra ampahibemaso dia mety hanentana ny hafa hanao toy izany koa!
Azafady, antsoy izahay amin'ny (877) 352-4497 na amin'ny mailaka: [email voaaro]
Manome voninahitra ireo mpanohana malala-tanana indrindra anay
Manana trosa feno fankasitrahana ho an'ireo olona, ​​orinasa, fototra ary fikambanana be fiahiana ireo izahay!
Tsarovy ny fangoraham-ponao amin'ireo tanora ampijaliana, ary tohano ireo ankizy marefo ho an'ny taranaka ho avy!
Ekena ho olom-pirenena tsara ianao!
Avereno ho fanohanana mitsitsy mivantana ny fiaranao tsy tianao!
Ny fanohanana anay amin'ny fanangonam-bola dia mety ho mora sy mahafinaritra!